Xasan Sheikh: “Dowladdu ha is qabadsiido malaayiin ayaan taalooyin ku dhisayaa dadka dhibana macaawi karo” | Somsoon
Home WARAR Xasan Sheikh: “Dowladdu ha is qabadsiido malaayiin ayaan taalooyin ku dhisayaa dadka...
Xasan Sheikh: “Dowladdu ha is qabadsiido malaayiin ayaan taalooyin ku dhisayaa dadka dhibana macaawi karo”
Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlayey shir madaxda xisbiyada uga socdo Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda, gaar ahaan Ra’iisul wasaaraha iyo Madaxweynaha.
Xasan Sheikh ayaa sheegay in dowladdu ay ka gaabisay u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan maamullada Hir-Shabelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ka jira dalka.
Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in aan la’is qabad siin karin in malaayiin Dollar oo aan bajadka ku jirin dowladda ay ku dhisto taalooyin, hadana aysan dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan u heli karin gurmad.
Madaxaweynihii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in tallaabo aan laga fileyn ay aheyd in dowladdu ay ku dhawaaqdo Qaaraan hala keeno, si loogu badbaadiyo dadka ku dhimanaya magaalada Beledweyne oo ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyey wabiga Shabeelle.
“Dowladdu mallaayiin Dollar oo aan bajadka ku jirin taalooyin ku dhisi kartaa waa soo heli karta,dadka reer Baladweyne ee biyaha dhex-jiifa qaarkood ku dhamaadeen dowladda lacag uma heli karto ee qaaraan hala keeno in leys qabadsiiyo ayaa loo baahan yahay” ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud.
Article horeAnkara offers condolences to Somalia after flood damage
Article socoda Somalia: military court concluded a case about Al-Shabaab’s infiltration into government institutions